World News | SAHAN ONLINE - Part 89
Madaxweynaha Burundi oo ku baaqay Caddaaladda in la horkeeno kuwii dilay Jen. Adolphe Nshimirimana
Madaxweynaha dalka Burundi, Pierre Nkurunziza ayaa ka dhawaajiyey in uu doonayo in lasoo qabto dadkii ka danbeeyey dilka Janaraalka ee Taliyaha Ciidamada dalkaas. Madaxweyne Pierre Nkurunziza ayaa … [Read more...]
Hoggaamiyihii Ururka Talibaan Mullah Omar oo la Sheegay In uu Geeriyooday
Hoggaamiyihii Talibaan Mullaha Cumar ayaa la sheegay in uu u geeriyooday Xanuunka Tiibishada laba sano ka hor Isbitaal kuyaala magaaladda Karachi ee dalka Pakistaan. Afhayeenka Hay'adda Sirdoonka … [Read more...]
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo Booqanaya dalka Itoobiya
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa shalay gaaray dalka Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa ,waxaana halkaas uga bilaabaneysa booqasho qaadaneysa laba maalmood ah. Raiisalwasaaraha dalka … [Read more...]
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo ka Furaya dalka Kenya Shirweynaha Ganacsiga.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa maanta lagu wadaa in uu ka furo dalka Kenya Shirweyne ballaaran oo looga hadlayo dhanka Ganacsiga oo madax kala duwan ka qeybgalayaan. Madaxweyne … [Read more...]
Dawladda Turkiga oo duqeyn Iyo Dagaal ku qaaday Xoogaga Daacish ee Suuriya
Dawladda Turkiga diyaaradaheeda ayaa maanta oo Jimce ah duqeyn la beegsatay Saddex fariisimood oo ay lahaayeen kooxda ISIS gudaha dalka Siiriya . Duqeynta fariisimahan ayaa ka dhacday xadka u … [Read more...]